I-Edge Estepona-i-Frontline Luxury Apartment
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJacques Olivier
UJacques Olivier unezimvo eziyi-691 zezinye iindawo.
Akukho ndleko iye yagcinwa kuyilo lwale ndlu isandula kwakhiwa i-3BR/2BA, enembono yolwandle, amabala anomhlaba angenamhlaba, kunye neentendelezo ezifikelela esibhakabhakeni. Ubuhle, ubugcisa bale mihla bugxininisa izinto zendalo ezenza iCosta del Sol ibe yiparadesi yeMeditera.
I-2 infinity pools, sauna, gym, pool yangaphakathi, kunye nokufikelela ngokuthe ngqo elwandle kukunika lonke ithuba lokonwabela ngaphandle, kwaye igalufa kunye neendawo zokutyela ezikufutshane zenza kube lula, ukuhlala ngokufanelekileyo.
Yiza ubone ukuba kunjani ukuphila ubomi kwi-Edge.
I-Edge yenziwe ngobuchwephesha ukuze kuqinisekiswe ukuba i-architecture yanamhlanje idibanisa kakuhle kunye neendawo ezijikelezayo. Iigadi ezintle ezibunjwe umhlaba kwintendelezo zineentende zezandla ezinde kunye nemibono ebalaseleyo yolwandle. Ikhompleksi yonke ihanjwe ngeenyawo, indawo yokupaka engaphantsi komhlaba kunye nokhuseleko lweyure ezingama-24 ekuqinisekiseni ukuba akukho traffic okanye iinkxalabo zokhuseleko.
-Amagumbi okulala ama-3 (ibhedi ephindwe kabini e-1, eyi-4 eyodwa)
- 2 yokuhlambela
-Ithala labucala elineembono zolwandle ngaphandle kokutya kunye nezihlalo
- Frontline kunye nembono yolwandle
- Ukufikelela ngokuthe ngqo elwandle
- Amachibi ama-3 angapheliyo, i-sauna, i-pool yangaphakathi, i-gym
-Imbonakalo yomhlaba entle
- Ukupaka ngaphantsi komhlaba
Ibekwe ecaleni kolwandle, imizuzu nje emihlanu ukuya e-Estepona Marina, uMda udibanisa ubuhle bale mihla kunye nokungaphelelwa lixesha kwendalo. Uyilo olugobileyo kunye neempawu zamanzi ngaphandle nje kwendlu zisikhumbuza amaza olwandle apho isithuba sijonge ngqo.
Iifestile ezisuka kumgangatho ukuya kwisilingi zijonge ngaselwandle zikhukulisa indawo ngokukhanya kwendalo, zikhanyisela igumbi elimhlophe eliqaqambileyo kwaye ziqaqambise iipopu zohlaza kunye nomsebenzi wobugcisa kuyo yonke loo nto.
Indawo yokuhlala ephambili enesofa ehonjisiweyo ene-flatscreen tv kunye netafile yokutyela ethambileyo enezihlalo ezintandathu.
Ngaphandle kwendawo yokutyela, ikhitshi elihle, lanamhlanje liphethe yonke into oyifunayo ukuze ulungiselele isidlo ngelixa usonwabela umbono wolwandle, kubandakanya:
-Isitovu sobume bobugcisa
- Ifriji yewayini
-Indawo yokukhawulelana nesiqithi ukulungiselela ukutya
- Iipleyiti, izitya, iikomityi, iiglasi, izinto zesilivere, njl.
Omabini amagumbi avuleleka kwithafa apho uya kufumana itafile yokutyela yangaphandle, ilungele ukonwabela isidlo phantsi kokutshona kwelanga okuhle. Izitulo zokuphumla zikuvumela ukuba utshise ilanga ngaphandle kokushiya indlu. Ngaphezu koko, izihlalo zothando ze-ratan zenza indawo egqibeleleyo yokonwabela iglasi yewayini okanye i-champagne, kunye nesofa ehambelanayo yeyona ndawo ifanelekileyo yokulala emva kwemini.
Ngaphandle kwendawo yokuhlala ephambili, uya kufumana amagumbi amabini okulala azaliswe kukukhanya kwendalo.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi ephindwe kabini ene-headboard ene-tufted kunye nelinen ezicocekileyo, ezithambileyo kunye nokufikelela kwigumbi lokuhlambela eline-en-suite enendawo entle, isinki yobugcisa kunye neshawari ehamba ngeethayile.
Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini zomntu omnye, zithanjiswe ngobumnandi ngefanitshala efanayo.
Igumbi lokuhlambela lesibini lingaphandle kwendawo yokuhlala kwaye libonisa ibhafu, ilungele abancinci.
Amachibi ama-3 angenasiphelo anokufikelela ngexesha lokuhlala kwakho, kunye nokufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni.
Uya kufumana i-sauna enethayile, igumbi lomphunga weteki, ichibi langaphakathi, kunye nejim ene-elliptical, i-treadmill, iintsimbi kunye nezixhobo ze-yoga.
Imizuzu nje ukuya e-Estepona kunye neekhilomitha ezimbalwa ukuya e-Sotogrande Marina, ephawulekayo kwiindawo zokutyela ezininzi kunye nemivalo.
Abadlali begalufa baqinisekile ukuba bayathanda ukufikelela ngokulula kwizifundo zomgangatho wokuqala, kubandakanya iValleromano, El Cortesin, kunye neValderrama. Ngaphakathi kwemizuzu engama-40 ye-Edge, ngaphezulu kwe-70 iikhosi zegalufa ezilindele ukufika kwakho.
Ukuhamba ngemizuzu engama-45 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseMalaga, kunye nemizuzu engama-20 ukuya eGibraltar, uya kufumana uxolo kunye nokuba wedwa kwindawo ephithizelayo yesixeko, kodwa ukufikelela lula kwizinto ezimangalisayo ezenza iCosta del Sol ibe yindawo yokuphupha kubakhenkethi abaninzi!
Ukukwenzela lula, sikwabonelela ngokutshintshela kwisikhululo seenqwelomoya ukuya/ukusuka eMalaga, umgcini womntwana, ukucoca okuthe chatha ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, kunye nabasebenzi abaqeshiweyo ukwenza imisebenzi yobuqu. Nceda ungathandabuzi ukufikelela kuzo naziphi na kwezi zibonelelo!
Yiza ube namava obomi kwi-Edge! Wamkelekile
Ifakwe kwimizuzu emihlanu ukusuka kwiZibuko lase-Estepona, uya kufumanisa ukuba iEdge yindawo ezolileyo ye-oasis evela kwiindawo zabakhenkethi ezihambelana neCosta del Sol. Iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela, kunye nezinto ezinomtsalane zikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Jacques Olivier
Silapha nanini na ufuna
UJacques Olivier yi-Superhost
Inombolo yomthetho: VFT/MA/41375